၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောမည် | ဧရာဝတီ
၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောမည်
ဧရာဝတီ| January 3, 2013 | Hits:772
| | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မနက်ဖြန် ကျရောက်မည့် ၆၅ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်းကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ NLD ပါတီ ဌာနချုပ်တွင် ပြောဆိုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို NLD ပါတီ ရုံးချုပ်၌ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး NLD ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကြေညာစာတမ်းကိုလည်း ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းလွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားသို့ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုအသင်းအဖွဲ့များက ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စာပေနှင့် တခြားနယ်ပယ်များမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါတီဝင်များ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများနှင့် သံတမန်များကို ဖိတ်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> MTK January 6, 2013 - 1:18 am	I was really feeling so sorry for, Both Government and Oppositon Party NLD have found celebration 65th anniversay of Burmese Independent Day fell on 1/4/2013. Let me ask, it is really Independent in Burma, you need to be getting feel the site of our 50 millions people. Since 1962 Junta Military Regime in country, depress all people, ethnics and control the power of States and then stuck the national sources, big corruptions>>50 millions people living with poverty, No human rights, still living with fear, civil war and Kachin conflicts etc… What kind of Independent Day in Burma.